Voatahy amin'ny ala madiodio, ahitra maitso, bibidia, morontsiraka misy felatanana, zavakanto sy kolontsaina mahaliana, fambolena dite, fitsaboana Ayurveda & spa, ary sakafo any an-danitra, Kerala dia manolotra traikefa tena izy manakaiky ny natiora. Mikasa fialan-tsasatra any Kerala ary tsy afaka hanana fotoana manjavozavo mihitsy ianao rehefa misitraka zava-manitra mivalampatra amin'ny molotra ary mankafy ny fahitana fahitana miavaka.
Toerana: Kochi, Kerala, India
Ity hotely mihaja an-dranomasina ity dia 45 km avy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Cochin. Ary fiara 20 minitra avy eo amin'ny gara akaiky indrindra - Ernakulam South. Any amin'ny Nosy Willingdon no misy azy, Taj Malabar Resort & Spa, Tsy jeren'ny Cochin ny seranan-tsambo voajanahary miaraka amin'ny harato fanjonoana Sinoa lavidavitra. Ny fahitana ny riandrano dia miantso anao hiondrana an-dranomasina. Ankafizo ny BBQ matsiro amin'ny Yacht, miaina ny traikefa fisakafoanana Rice Boat na mitsangantsangana eny ambadiky ny rano rehefa mahita ny Firen'Andriamanitra. Toeram-panatanjahan-tena 24 ora, dobo tsy manam-petra, Jiva Spa, salon fanaovana hatsaran-tarehy, efitrano filalaovana, efitrano fivoriana, efitrano fanasana no vitsy amin'ireo fampialana sasatra.
Toerana: Kovalam, Kerala, India
Taj Green Cove Resort & Spa Kovalam, tsy mahita ny Ranomasina miaraka amin'ny hadiony eo afovoany ary mirehareha amin'ireo bozaka manaparitaka sy lalambe hazo manamorona ny morontsiraka. Ny fandriana amoron-dranomasina manamorona ny morontsiraka dia hanome anao ny fiadananao notadiavinao. Manaova fivoriana manan-danja ao amin'ny tontolo tsy misy glitch ao amin'ny toeram-pivarotana matihanina ho an'ny hetsika ara-barotra milamina. Mandrosoa ao amin'ny dobo tsy manam-petra ho an'ny filomanosana mamelombelona amin'ny maraina ary andao hiasa mandritra ny alina amin'ny 24/7 Fitness Center. Ankafizo ny fisakafoanana barbecue romantika ho an'ny roa ao amin'ny Bait, trano fisakafoanana hazan-dranomasina manerantany ary andeha hiakatra amina sambo Lagoon tantaram-pitiavana miaraka amin'ny iray hafa manan-danja.
Toerana: Bekal, Kerala, India
Taj Bekal Resort & Spa, Kerala trano villa sy efi-trano aingam-panahy avy amin'ny famolavolana ny boaty Ketuvallam. Mialà sasatra ao an-tokontany mahafinaritra sy marevaka ary zaridaina mitafy ala ao amin'ity toeram-pialofana spa ao Kerala ity. Ankafizo ny fahitana ny morontsirak'i Kappil amoron-dranomasina izay mifalifaly amin'ireo bozaka voahosotra. Velomy amin'ny Jiva Spa miaraka amin'ny fitsaboana Ayurveda isan-karazany na mandeha mijery vorona mba hanaovana vorona ary mahita ny vorona volomparasy sy papay. Raha te-hitafy ny baotinao ianao ary hiala lavitra, dia tsidiho ny riandrano ao amin'ny Ratnakars Farm amin'ny halavirana 19 kilometatra miala ny toeram-pialofana.
Ny Gateway Hotel Marine Drive
Toerana: Ernakulam, Kerala, India
Ny Gateway Hotel Marine Drive manolotra fahitana mahafinaritra ny riandrano sy ny seranan-tsambo Cochin madio. Faly amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina amin'ny hariva arahin'iaina fisakafoanana eo an-tampon-trano. Ity trano fandraisam-bahiny any Ernakulam ity dia miorina eo afovoan-tanàna ary 45 minitra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Kochi ary fiara kely miala ny foibem-barotra Cochin. Ankafizo ny hazan-dranomasina voaendy sy lovia barbequed ao amin'ny Blueflame, ary sakafo nentin-drazana Indiana any Utsav. Ny ivon-toerana ayurveda manontolo dia manome traikefa mamelombelona hanatsara ny fiainanao ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-panahy.
Toerana: Kumarakom, Kerala, India
Fantatra amin'ny anarana hoe Little Jewel of Kumarakom, Taj Kumarakom Resort & Spa, Kerala dia fialantsasatra amoron-dranomasina izay manitrika anao amin'ny hatsaran'ny rano manjelanjelatra ao amin'ny farihy Vembanad. Ity toeram-pialamboly lafo vidy ao Kerala ity dia manome sakafo nahandro any Mediterane sy Avaratra ao amin'ny Baker's Gourmet House, atolotra ao amin'ny Open Coffee House sy divay premium ao amin'ny Easy Bar ny sakafo an-dranomasina sy ny sakafon-tsakafo.
Location: Janardhanapuram, Varkala, India
Hita ny ranomasina Arabo, nipetraka teo am-baravarankely Gateway Varkala dia fialan-tsasatra tonga lafatra ho an'ny mpandeha raharaham-barotra sy ireo mitady fialam-boly. Ny rendrarendra, ny fomba ary ny fampiononana dia miara-mivondrona ao amin'ity toeram-pitsangatsanganana mitokana any Varkala ity. Ny trano fandraisam-bahiny dia fiara kely miala amin'ny Tempolin'i Janardhanaswamy 2000 taona malaza ary 2.5 km miala ny gara Varkala. Sahabo ho 50 km miala ny seranam-piaramanidina Thiruvananthapuram.
Any akaikin'ny ivon-toeram-pivarotana sy tsy lavitra loatra ny toerana sy feo eo an-toerana, The Gateway Hotel Calicut no trano fandraisam-bahiny tsara indrindra hampiala sasatra sy hampiditra fahafinaretana amin'ny dia ataon'ny orinasa. Mandany fotoana amin'ity toerana itodiana amoron-dranomasina ity hahitanao ireo firazanany maro.
Ny fananana IHCL dia hita manerana ny toerana voalohany any Kerala toy ny Cochin, Trivandrum, Kumarakom, Ernakulam ary Calicut. Ireto hotely sy trano fandraisam-bahiny any Kerala ireto dia mety ho an'ny mpandeha amin'ny dia fialan-tsasatra na fitsangatsanganana amin'ny raharaham-barotra na fianakaviana mikasa ny fampakaram-bady.